Sera: Chineke Kpọrọ Ya “Nne Ndị Eze”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
ṄOMIE OKWUKWE HA | SERA
WEREGODỊ ya na ị na-ahụ Sera ka ọ rụkatara ọrụ, bilie ka ọ gbatịa úkwù, ya elelie anya ya elu. Otú o si jiri amamihe na-eduzi ndị na-ejere ha ozi mere ka ha na-enwe obi ụtọ, na-arụsikwa ọrụ ike. Werekwa ya na ị na-ahụ Sera ka ọ na-ahịọ aka ya, na-achọ ime ka mgbu ọ na-egbu ya kwụsị. Ọ ga-abụ na ọ dịla anya ọ nọ na-adụchi ebe dọwara adọwa n’ákwà ụlọikwuu ha ji mere ụlọ. Obi ya niile dịkwa n’ọrụ ahụ ọ na-arụ. Ákwà ahụ e ji ajị ewu mee akaala n’ihi mmiri na anwụ na-acha ya kemgbe ọtụtụ afọ. O mekwara ka Sera cheta na ọ dịla anya ha nọ na-akwagharị si n’otu ebe gaa n’ebe ọzọ. Anyanwụ adaala, chi ejiwakwala. N’ụtụtụ, Sera nọ na-ele Ebreham * ka ọ na-apụ. Ma ugbu a, ọ na-ele anya n’ụzọ ahụ o si pụọ, na-atụ anya ịhụ ya ka ọ na-abata. Ka o lepụrụ anya hụ di ya ka ọ na-agbadata n’ugwu dị n’akụkụ ebe ha bi, ya amụmụwa ọnụ ọchị.
Afọ iri agaala kemgbe Ebreham kpọ nnukwu ezinụlọ ya gafee Osimiri Yufretis, bịarute n’obodo Kenan. Sera ji obi ya niile na-akwado di ya ná nnukwu njem a ha na-eme n’agbanyeghị na ha amaghị ebe ha na-aga. Ihe mere o ji na-eme ya bụ na ọ ma na Jehova kwere di ya nkwa na ọ ga-esi n’aka ya mụta nwa a gọziri agọzi nakwa mba. Sera ọ̀ ga-eso mezuo nkwa a Chineke kwere? Sera bụ nwaanyị aga. Ọ gbaakwala afọ iri asaa na ise ugbu a. O nwere ike ịna-eche sị: ‘Olee otú ihe a Jehova kwuru ga-esi eme ebe mụnwa bụ́ nwunye Ebreham bụ nwaanyị aga?’ E nweghị onye ọ ga-abụ ya aghara ịdị ya otú ọ dị Sera.
Mgbe ụfọdụ, anyị nwekwara ike ịna-eche, sị: ‘Olee mgbe nkwa Chineke ga-emezu?’ Ọ naghị adịchara anyị mfe inwe ndidi, karịchaa ma ọ bụrụ na e nwere ihe anyị na-atụsi anya ike ka o mee. Olee ihe anyị ga-amụta n’okwukwe ezigbo nwaanyị a?
“JEHOVA EGBOCHIWO M”
Ọ dịbeghị anya ezinụlọ ha si Ijipt lọta Kenan. (Jenesis 13:​1-4) Ha mara ụlọikwuu ha n’ugwu dị n’ebe Ọwụwa Anyanwụ Betel ma ọ bụ Lọz dị ka ndị Kenan si akpọ ya. Sera nwere ike ịnọ n’elu ugwu ahụ hụ ọtụtụ ebe n’Ala Nkwa ahụ. O nwekwara ike ịnọ ebe ahụ hụ obodo ndị Kenan dị iche iche, nakwa ọtụtụ ụzọ e si aga obodo ndị dị anya. Ma, ihe a niile ọ na-ahụ enweghị nke a ga-eji tụnyere obodo a mụrụ ya. A mụrụ ya n’obodo Ọọ. Ọ bụ otu n’ime obodo ndị dị na Mesopotamia. Ọ dị ihe dị ka otu puku kilomita na narị kilomita itoolu ma e si ebe Sera nọ gawa ya. E nwere ọtụtụ ihe ndị Sera hapụrụ. Ọ hapụrụ ndị ikwu ya, ihe ndị e ji enyere ndụ aka dị n’obodo ha mepere emepe, ahịa ha na-ekwo ekwo na ọmarịcha ụlọ ha. O nwedịrị ike ịbụ na a gbapuru mmiri n’ụlọ ha. Ọ bụrụ na anyị chere na Sera na-echeta obodo ya, ya ana-agụ ya agụụ ịlaghachi, ọ pụtara na anyị amaghị onye nwaanyị a na-atụ egwu Chineke bụ.
Mgbe ihe dị ka puku afọ abụọ gachara, Pọl onyeozi si n’ike mmụọ nsọ dee gbasara okwukwe Sera na Ebreham, sị: “A sị na ha nọ na-echeta ebe ahụ ha si pụọ, ha gaara enwe ohere ịlaghachi.” (Ndị Hibru 11:​8, 11, 15) E nweghị mgbe ihe ndị ahụ Ebreham na Sera hapụrụ gụwara ha agụụ. A sị na e nwere mgbe ọ gụwara ha, ha gaara ekpebi ịlaghachi n’ụlọ ha. Ọ bụrụ na ha laghachiri n’obodo Ọọ, ihe ùgwù a na-enweghị atụ Jehova nyere ha agaraghị eru ha aka. Kama ịbụ ndị e ji ama atụ maka okwukwe ha, ha gaara abụ ndị echefuru echefu.
Sera anọghị na-eche gbasara ihe ndị ha hapụrụ, kama, o lekwasịrị anya n’ihe ndị ha ga-enweta n’ọdịnihu. Ọ nọ na-akwado di ya ka ha na-aga ebe ha na-amaghị, na-enye aka na-akwakọta ihe ha ma ha pụwa n’ebe ha mara ụlọikwuu, ma na-achịkọta ụmụ anụmanụ ha. N’ebe ọ bụla ha kwụsịrị, ya enye aka maa ụlọikwuu ha ọzọ. E nwekwara nsogbu ndị ọzọ o diri. Jehova chetaghachiiri Ebreham nkwa o kwere ya. Ma, e nweghi ihe o kwuru gbasara Sera.​—⁠Jenesis 13:​14-17; 15:​5-7.
N’ikpeazụ, Sera kpebiri na oge eruola ka ọ gwa Ebreham ihe ọ nọ na-eche ha ga-eme. Weregodị ya na ị na-ahụ otú ihu dị ya ka ọ na-agwa di ya, sị: “Lee! Jehova egbochiwo m ịmụ nwa.” Sera gwaziri di ya ka ọ kpọrọ Hega bụ́ nwaanyị na-ejere ya ozi ka ọ mụtara ya nwa. Chegodị otú obi dị Sera mgbe ọ na-agwa di ya ụdị ihe a. O nwere ike ịdị anyị ka ihe a Sera sịrị di ya mee adịghị mma. Ma n’oge ahụ, nwoke nwere ike ịlụ karịa otu nwaanyị ma ọ bụkwanụ nwee iko nwaanyị ka o nwee ike ịmụta onye ga-anọchi ya. * Ọ̀ ga-abụ na Sera chere na ọ bụ otú ahụ ka Ebreham ga-esi mụta nwa ahụ Chineke kwere ya ná nkwa? Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ihe doro anya bụ na Sera dị njikere ime ihe ga-esiri ya ezigbo ike ka di ya mụta nwa. Gịnị ka Ebreham mere? Baịbụl kwuru na o ‘gere ntị n’olu Sera.’​—⁠Jenesis 16:​1-3.
È nwere ihe Baịbụl kwuru n’akụkọ a gosiri na ọ bụ Jehova mere ka Sera gwa Ebreham ka ọ kpọrọ Hega? Mba. Kama, Sera kwuru obi ya dị ka mmadụ. O chere na ọ bụ Chineke mere ka ọ ghara ịmụta nwa nakwa na o nweghị ụzọ ọzọ Chineke ga-esi mee ka di ya mụta nwa ma ọ́ bụghị site na nwaanyị ọzọ. Otú a Sera chere a ga-esi mụta nwa ahụ ga-akpatara ya nsogbu. Ma, o gosiri na ọ naghị eche gbasara onwe ya naanị. Ọ̀ bụ na ọ tụghị anyị n’anya na Sera mere ihe na-agaghị abara naanị ya uru n’ụwa a ọtụtụ ndị na-achọkarị ihe ga-abara naanị ha uru? Anyị na-eṅomi Sera ma ọ bụrụ na ihe ka anyị mkpa ná ndụ bụ ime uche Chineke.
“Ị CHỊRỊ ỌCHỊ”
Ebreham na Hega mechara nwee mmekọahụ, Hega adịrị ime. Mgbe Hega matara na ya dị ime, o chere na ya dịzi mkpa karịa Sera. Ọ maliteziri ileda nne ya ukwu anya. Ihe a abụtụdịghị ihe Sera tụrụ anya ya. Baịbụl kwuru na Sera bidoro imesi Hega ike. Ma, Baịbụl agwaghị anyị otú o si mee ya. Ebreham na Chineke kwadokwara ihe ahụ o mere. Hega mechara mụọ nwa nwoke, ha agụọ ya Ishmel. (Jenesis 16:​4-9, 16) Mgbe ọzọ Baịbụl kwuru na Jehova ziri Ebreham ozi, Sera dịzi afọ iri asatọ na itoolu, Ebreham adịrị afọ iri itoolu na itoolu. Ozi Jehova ziri ha n’oge a tọgburu ha atọgbu.
Na nke ugbu a, Jehova kwere enyi ya bụ́ Ebreham nkwa na ọ ga-eme ka ụmụ ya mụbaa. Chineke gụgharịrị ya aha. Ihe e ji mara ya kemgbe bụ Ebram. Ma Jehova gbanwere aha ya ka ọ bụrụzie Ebreham, nke pụtara, “Nna nke Ìgwè Mba Dị Iche Iche.” Ọ bụzi ugbu a ka Jehova mere ka a mata ihe ga-abụ ọrụ Sera n’imezu uche ya. Ọ gbanwere aha ya bụ́ Seraị, nke nwere ike ịpụta “Onye Na-ese Okwu,” ka ọ bụrụzie Sera, bụ́ aha e ji mara ya taa. Gịnị ka Sera pụtara? Ọ pụtara “Nne Ndị Eze.” Jehova kọwara ihe mere o ji nye ezigbo nwaanyị a aha ahụ. Ọ sịrị: “M ga-agọzi ya, m ga-emekwa ka ọ mụọrọ gị nwa nwoke; m ga-agọzi ya, ọ ga-aghọkwa mba dị iche iche; ọ bụ n’ahụ́ ya ka ndị eze na-achị ndị dị iche iche ga-esikwa pụta.”​—⁠Jenesis 17:​5, 15, 16.
Ọ bụ nwa nwoke Sera ga-amụtara Ebreham ka Jehova ga-esi n’aka ya gọzie mba niile. Aha Chineke kwuru ka a gụọ nwa ahụ bụ Aịzik. Ọ pụtara “Ọchị.” Mgbe mbụ Chineke gwara Ebreham na Sera ga-amụta nwa nke ya, Ebreham ‘gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, malite ịchị ọchị.’ (Jenesis 17:17) Ihe a Jehova kwuru juru Ebreham anya, meekwa ya ezigbo obi ụtọ. (Ndị Rom 4:​19, 20) Gịnịkwanụ ka Sera mere?
Obere oge e zichara Ebreham ozi ahụ, ndị ikom atọ ha na-amaghị bịara n’ebe ha mara ụlọikwuu. Ha bịara mgbe anyanwụ na-achasi ike. Di na nwunye a merela agadi pụtara ozugbo ka ha nabata ndị a bịara na nke ha. Ebreham gwara Sera, sị: “Mee ọsọ ọsọ! Mata ihe ọ̀tụ̀tụ̀ sia ntụ ọka atọ e gwere nke ọma, gwọọ ya, mee achịcha.” Ile mmadụ ọbịa n’oge ahụ abụghị obere ọrụ. Ebreham ahapụghịrị Sera ọrụ ahụ niile. Ọ gara ozugbo ka o gbuo nwa oké ehi, ma kwadebe ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. (Jenesis 18:​1-8) “Ndị ikom” ahụ bụ ndị mmụọ ozi. Ọ ga-abụ ihe a merenụ ka Pọl onyeozi bu n’obi mgbe o dere, sị: “Unu echefula ile ọbịa, n’ihi na site na ya, ụfọdụ lere ndị mmụọ ozi ọbịa n’amaghị ama.” (Ndị Hibru 13:⁠2) Ì nwere ike ịna-ele ọbịa ka Ebreham na Sera?
Sera ejighị ile ọbịa egwu egwu
Otu n’ime ndị mmụọ ozi ahụ kweghachiri Ebreham nkwa ahụ Chineke kwere ya na Sera ga-amụrụ ya nwa nwoke. Mgbe ọ na-ekwu ihe a, Sera nọ n’ụlọikwuu ya, ebe mmadụ na-agaghị ahụ ya, na-ege ntị. Sera chewara otú agadi nwaanyị dị ka ya ga-esi mụọ nwa, ya eyie ya ihe na-agaghị ekwe omume, ya adapụ n’ọchị. Ọ gwawara onwe ya, sị: “Ugbu a m kaworo nká, m̀ ga-enwe obi ụtọ n’ezie, onyenwe m emewokwa agadi?” Mmụọ ozi ahụ jụrụ Sera ajụjụ mere ka o chee echiche. Ọ jụrụ ya, sị: “Ọ̀ dị ihe nyịrị Jehova?” Ihe Sera mere ozugbo ahụ bụ ihe onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ime. Ụjọ jidere ya, ya amalite ịgọ agọ. Ihe pụziri ya n’ọnụ bụ: “Achịghị m ọchị!” Mmụọ ozi ahụ asị ya: “Ee e! kama ị chịrị ọchị.”​—⁠Jenesis 18:​9-15.
Ọchị Sera chịrị ò gosiri na o nweghị okwukwe? Mbanụ. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụkwa okwukwe ka Sera ji nweta ike ịtụrụ ime mkpụrụ nke afọ, ọbụna mgbe ọ gafere oge ịmụ nwa, ebe o weere onye ahụ nke kwere nkwa n’onye kwesịrị ntụkwasị obi.” (Ndị Hibru 11:11) Sera ma Jehova nke ọma, ọ makwa na Jehova ga-emezuli nkwa ọ bụla o kwere. Anyịnwakwa kwesịrị inwe okwukwe siri ike ka Sera. Anyị kwesịrị ịgbalị mụọ Baịbụl ka anyị matakwuo Chineke nke ọma. Ka anyị na-amụtakwu gbasara ya, anyị ga-ahụ na okwukwe Sera nwere n’ebe ọ nọ kwesịrị ekwesị. N’eziokwu, Jehova na-emezu ihe ọ bụla o kwere ná nkwa. Mgbe ụfọdụ, otú ọ ga-esi emezu nkwa ya nwere ike ịtụ anyị n’anya nke na anyị nwere ike ịchịwa ọchị.
“GEE NTỊ N’OLU YA”
Jehova gọziri Sera maka okwukwe ya na-enweghị atụ
Mgbe Sera gbara afọ iri itoolu, ihe ọ na-atụ anya ya kemgbe ọ lụrụ di mechara mee. Ọ mụtaara di ya ọ hụrụ n’anya nwa nwoke mgbe di ya gbara otu nari afọ. Ebreham gụrụ nwa ahụ Aịzik ma ọ bụ “Ọchị,” otú ahụ Chineke gwara ya. Weregodị ya na ị na-ahụ Sera ka ọ na-achị ọchị n’agbanyeghị na ezigbo ike gwụrụ ya n’ihi na ọ ka mụchara nwa. Ọ sịrị: “Chineke emeworo m ihe ọchị: onye ọ bụla nụrụ banyere ya ga-esoro m chịa ọchị.” (Jenesis 21:⁠6) Ọ ga-abụrịrị na nwa a Jehova mere ka ọ mụta mere ka obi na-atọ ya ụtọ mgbe niile ọ dị ndụ. Ma, o mere ka o nwekwuo ọrụ ọ ga-arụ.
Mgbe Aịzik gbara afọ ise, ha meere ya oké oriri mgbe a kwụsịrị ya ara. Ma, e nwere nsogbu dịnụ. Baịbụl kwuru na Sera nọ “na-ahụ” na Ishmel na-achọ Aịzik okwu. Ishmel bụ́ nwa Hega, onye dị afọ iri na itoolu nọ na-eme Aịzik akaje. Ọ bụghị egwuregwu ka ọ na-egwusa Aịzik. Ọ bụ ya mere Pọl onyeozi ji mechaa si n’ike mmụọ nsọ dee na ọ bụ mkpagbu ka Ishmel na-akpagbu Aịzik. Sera ma na ihe a Ishmel na-eme ga-akpatara Aịzik nwa ya ezigbo nsogbu. Ọ makwa na e nwere ọrụ pụrụ iche Aịzik ga-arụ iji mezuo uche Jehova. N’ihi ya, ọ katara obi gwa Ebreham okwu. Ọ gwara ya ka ọ chụpụ Hega na Ishmel.​—⁠Jenesis 21:​8-10; Ndị Galeshia 4:​22, 23, 29.
Gịnị ka Ebreham mere? Baịbụl sịrị: “Ihe ahụ wutere nnọọ Ebreham n’ihi nwa ya.” Ọ hụrụ Ishmel n’anya. Obi nwa ekweghị ya mee ihe ahụ. Ma Jehova ma ihe ka mma Ebreham kwesịrị ime. Baịbụl sịrị: “Chineke wee sị Ebreham: ‘Ekwela ka ihe ọ bụla Sera na-agwa gị banyere nwa okoro ahụ nakwa banyere ohu gị nwaanyị wute gị. Gee ntị n’olu ya, n’ihi na ihe a ga-akpọ mkpụrụ gị ga-esi n’Aịzik.’” Jehova mere ka obi sie Ebreham ike na ya ga-elekọta Hega na nwa ya. Ebreham mere ihe Chineke gwara ya.​—⁠Jenesis 21:​11-14.
Sera bụ ezigbo nwaanyị. O mere ka Ebreham zuo ezuo. Ọ naghị agwa di ya naanị ihe ọ chọrọ ịnụ. Oge ọ chọpụtara na e nwere nsogbu nwere ike imebiri ezinụlọ ha ihe, ọ gwara di ya okwu n’ezoghị ọnụ. Anyị ekwesịghị iche na otú o si gwa di ya okwu n’ezoghị ọnụ pụtara na ọ naghị akwanyere di ya ùgwù. A sị ka e kwuwe, Pita onyeozi, bụ́ onye lụrụ nwaanyị, mechara kwuo na Sera bụ nwaanyị e ji ama atụ nke kwanyeere di ya ùgwù nke ukwuu. (1 Ndị Kọrịnt 9:5; 1 Pita 3:​5, 6) N’eziokwu, ọ gaghị abụ ùgwù ka Sera kwanyeere di ya ma a sị na ọ gbara nkịtị, n’ihi na ịgba nkịtị gaara emebiri ma di ya ma ndị ezinụlọ ya ezigbo ihe. Sera ji obiọma kwuo ihe o kwesịrị ikwu.
Ọtụtụ ụmụ nwaanyị lụrụ di na-amụta ihe n’ihe a Sera mere. Ha na-amụta otú ha ga-esi jiri nkwanye ùgwù na-agwa di ha okwu. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịdị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka Jehova gwa di ha ka ha gee ha ntị otú ahụ o meere Sera. Ma, ọ dị ha otú ahụ, ha kwesịrị inwe okwukwe, ịhụnanya, na ndidi ka Sera.
Jehova kwuru na Sera ga-abụ “Nne Ndị Eze,” ma o meghị ka ọ chọwa ka e mewe ya ka nwunye eze
Ọ bụ eziokwu na Jehova kwuru na Sera ga-abụ “Nne Ndị Eze,” o meghị ka Sera chọọ ka e emewe ya ka nwunye eze. Ka a sịkwa ihe mere na n’oge ọ nwụrụ, mgbe ọ dị otu narị afọ na iri abụọ na asaa, Ebreham malitere ‘ịkwara ya ákwá arịrị na ibere ya ákwá.’ * (Jenesis 23:​1, 2) Ọnwụ nwunye ọma ya wutere ya nke ukwuu. O dokwara anya na o wutere Jehova. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji akpọlite ya n’ọnwụ mgbe ụwa ga-aghọ paradaịs. Sera na ndị niile na-eṅomi okwukwe ya ga-adị ndụ ebighị ebi n’ọdịnihu.​—⁠Jọn 5:​28, 29.
^ para. 3 Ihe a na-akpọ di na nwunye a bụ Ebram na Seraị tupu Chineke agbanwee aha ha. Ma n’isiokwu a, anyị ga na-akpọ ha aha a kacha jiri mara ha, ka ọ dị mfe ịmata ndị a na-ekwu.
^ para. 10 E nwere mgbe Jehova hapụrụ ndị mmadụ ka ha na-alụ karịa otu nwaanyị, na-enwekwa iko nwaanyị. Ma o mechara si n’ọnụ Jizọs mee ka o doo anya na ọ chọrọ ka nwoke na-alụ naanị otu nwaanyị otú ahụ o nyere Adam otu nwaanyị n’ogige Iden.​—⁠Jenesis 2:24; Matiu 19:​3-9.
^ para. 25 Sera bụ naanị nwaanyị Baịbụl kwuru afọ ole ọ gbara mgbe ọ nwụrụ.